सिल्लल: मालवेयरको परिभाषा के हो?
जुलिया वसानेवा अनुसार, सेल्टल्ट वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, मालवेयर हानिकारक र हानिकारक अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि एक समग्र शीर्षक हो। को लागि अनलक गरिएको र नसोचेको छ, यसले तपाइँको पीसीमा परिचय दिनको लागि प्रबल गर्दछ। Fraudsters ले मैलवेयर को उपयोग तपाईंको रेकर्ड को नकद प्राप्त गर्न को लागि र यसको अतिरिक्त धोखाधड़ी को लागी कार्यान्वयन गर्न को लागी।
मालवेयरले तपाइँको पीसीमा कुन विकल्प राख्छ?
मालवेयर नियमित रूपमा नि: शुल्क शेयरवेयर वा अनुप्रयोगहरूमा नियमित रूपमा राखिएको छ जुन तपाई वेबबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। जब साइटमा जानुहुन्छ, तपाईले एक उक माथि उठाउनुहुन्छ जुन यसले तपाइँको पीसीमा संक्रमण पत्ता लगाएको छ। तपाईं एक संक्रमण स्क्यानरको नि: शुल्क परीक्षण परिचय गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाइँको पीसीको अनलाइन झाडो चलाउनुहोस्।
तपाईंले कुनै पनि व्यक्तिबाट यो पाठ प्राप्त गर्नुभएको छ जुन तपाईं अनलाइनमा नेटवर्किङ मार्फत यो व्यक्तिको वेबसाईटमा रहेको छ, यस फोटोको जडान सहितको जानकारी सहित। यदि तपाइँ जडान ट्याप गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको पीसीले मालवेयरसँग मिल्दछ।
आपराधिक को काम गरेर रहे हो तंत्र?
तपाईंको अनुप्रयोगहरूको सामान्य प्रयोगमा प्रभाव पार्ने, मालवेयरले तपाइँको पीसीमा तपाईको अनुप्रयोगहरूको सामान्य प्रयोगलाई असर गर्छ। यो विभिन्न ढाँचाहरूमा सम्भव हुनुपर्छ:
तपाईंको बैंकको साइटमा जाने बेला त्यहाँ फिनी साइटमा उल्टाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावना छ।
वेब आधारित बैंकिंगको प्रयोग गर्दा, तपाईंले उक माथि उठाउनुहुन्छ, जुन अचानक अनुरोध गर्दछ कि तपाइँ केहि निश्चित प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्नुहोस् र डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न गर्नुहोस्।
डेटा प्राप्त गर्न स्पाइवेयरको उपयोग
ब्राउज गर्दा, स्पाइवेयरले तपाईंको भण्डारणमा कागजातहरू जाँच गर्दछ, अन्य स्पाइवेयर परिचय गराउँछ, तपाईंको वेब ल्यान्डिङ पेज र अन्यथा। तपाईंको गतिविधिको अधिक भागको जाँच गरेर, स्पाइवेयरले तपाइँको वर्गीकृत डेटालाई अपराधीलाई स्क्यान गर्न सक्छ।
आफ्नो पीसी को रक्षा
सँधै वेबमार्फत स्थापना गर्दा निम्न सुझावहरू ध्यान राख्नुहोस्:
सधैँ हेर्नुहोस् कि तपाईंको कार्यविधि ढाँचाको हालैका अद्यावधिकहरू तपाइँको पीसीमा पेश गरिएको छ। तपाइँको पीसीको काम गर्ने ढाँचा फलस्वरूप हालैको अद्यावधिकहरू स्थापना गर्न कन्फिगर गरिएको हुन सक्छ र तिनीहरूलाई तुरुन्तै परिचय दिन्छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ब्राउजिङ्ग अनुप्रयोगको सुरक्षा पर्याप्त स्तरको सेट गरिएको छ।
यदि तपाईं टाढाको काम गरिरहनु भएको छ भने, सङ्गठन सुरक्षित छ (जस्तै, गुप्त शब्द प्रयोग गरेर)।
तपाईंको पीसी मा सही सुरक्षा प्रयासहरु को बावजूद, यो अतिरिक्त आवश्यक छ कि तपाईं वेब बैंकिंग को धन को उपयोग गर्दा र विशेष रूप देखि आफ्नो आदान प्रदान को रूप मा ध्यान दिंदा जब सावधान विचार दिनुहोस।
उदाहरणका लागि, यो आवश्यक छ कि तपाइँ सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ:
केवल एक हस्ताक्षरमा डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न गर्नुहोस् जुन तपाईं अनुचित हुनुहुन्छ वा आफैलाई सोध्नुभयो।
प्रत्येक अण्डा या एक्सचेंज को लागि सही उन्नत चिह्न को उपयोग गर्नुहोस।
त्यसै गरी, वेब र ईमेल प्रयोग गर्दा हेर्नु पर्यो।
विश्वसनीय साईटहरू मात्रै खोल्नुहोस् र अस्पष्ट वा आश्वस्त साइटहरूको कुनै पनि रेकर्ड वा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड नगर्नुहोस्।
स्प्याम र संदिग्ध सन्देशहरू अस्वीकार गर्नुहोस्।
तपाईंको USB स्टिकलाई कुनै पनि पीसीमा जडान नगर्नुहोस्।
. Source - claromizador gs-h2 coils